အောင်လအန်ဆန်း (အင်္ဂလိပ်: Aung La Nsang)သည် အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ အသုံးချ ကိုယ်ခံပညာ တိုက်ခိုက်ရေးလောက ပညာရှင်များသာ ယှဉ်ပြိုင်သည့် ပွဲစဉ်များတွင် မြန်မာ့စပါးအုံးမြွေ (Burmese Python) ဟု တင်စားခေါ်ဝေါ်ခြင်းခံရသော မြန်မာနိုင်ငံသားကချင်‌လူမျိုး၊ အမေရိကန်နိုင်ငံသား ကိုယ်ခံပညာသိုင်းပေါင်းစုံတိုက်ခိုက်ရေးသမားတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ အရပ် ၆ ပေ ၁ လက်မနှင့် ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန် ၁၈၅ ပေါင်ရှိပြီး ကျောပြင်ပုခုံးနေရာတွင် "Jinghpaw" ဟု တက်တူးရေးထိုးထားသော MMA လိုက်ဟဲဗီးဝိတ်တန်းရှင်ဖြစ်သည်။ စင်္ကာပူအခြေစိုက် ဝမ်းချန်ပီယံရှစ် (ONE Championship) အဖွဲ့အစည်းက ကျင်းပသည့် ဝမ်းချန်ပီယံရှစ်ခါးပတ်လုပွဲများတွင် လိုက်ဟဲဗီးဝိတ်တန်းနှင့် မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းတို့တွင် ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့သည်။ ယခုလက်ရှိအချိန်တွင် လိုက်ဟဲဗီးဝိတ်တန်းချန်ပီယံဖြစ်သည်။
(1985-05-21) မေ ၂၁၊ ၁၉၈၅ (အသက် ၃၇)
မြစ်ကြီးနား၊ ကချင်၊ မြန်မာ
၆ ft ၁ in (၁.၈၅ m)
၂၀၄ lb (၉၂.၅ kg; ၁၄.၆ st)
Middleweight (205 lbs)
Light Heavyweight (225 lbs)
Cruiserweight (225 lbs)
ဘရာဇီး ဂျူဂျစ်ဆု၊ လက်ဝှေ့၊ မွေထိုင်း
Hard Knocks 365 (former)
အောင်လသည် ရတနာလုပ်ငန်းရှင် ဦးအင်ဆန်တူးအောင်နှင့် ဒေါ်ရှဒန်နန်ဘူတို့၏ မွေးချင်း ၅ ယောက်ထဲက တတိယမြောက်သား ဖြစ်သည်။ ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့ ဒူကထောင်ရပ်ကွက်မှ ကချင်တိုင်းရင်းသားတဦး ဖြစ်ကာ အတန်းပညာကို ရန်ကုန် International School တွင် တက်ရောက် သင်ကြားခဲ့ပြီး၊ ၂၀၀၁ ခုနှစ် အကုန် ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် အမေရိကားမှာ စတင် အခြေချနေထိုင်၍ အမေရိကန်နိုင်ငံ မစ်ရှီဂန်ပြည်နယ်၊ အင်ဒရူးတက္ကသိုလ်မှ စိုက်ပျိုးရေး ဘာသာရပ်နှင့် ဘွဲ့ရရှိထားသူ ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ် တက်နေစဉ် ကာလမှာပင် အပျော်တမ်း ကလပ်ပွဲများ၌ ယှဉ်ပြိုင် ထိုးသတ်နေခဲ့ပြီး၊ ပညာရှင်လက်ဝှေ့ လောကထဲ ဝင်ရောက် လာသူဖြစ်သည်။
ONE Championship ချန်ပီယံ ရရှိခြင်းပြင်ဆင်
38 matches 26 wins 11 losses
Loss 26–11 (1) Reinier de Ridder Submission (rear-naked choke) ONE Championship: Inside the Matrix ၃၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ 1 3:26 Kallang, Singapore Lost the ONE Middleweight Championship.
Win 26–10 (1) Brandon Vera TKO (punches) ONE Championship: Century Part2၁၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉23:23 Tokyo, Japan Defended the ONE Light Heavyweight Championship.
Win 25–10 (1) Ken Hasegawa TKO (punches) ONE Championship: A New Era ၃၁ မတ် ၂၀၁၉24:41 Tokyo, Japan Defended the ONE Middleweight Championship.
Win 24–10 (1) Mohammad Karaki TKO (punches) ONE Championship: Pursuit of Greatness ၂၆ အောက် ၂၀၁၈ 1 2:21 Yangon, Myanmar Defended the ONE Middleweight Championship.
Win 23–10 (1) Ken Hasegawa TKO (punches) ONE Championship: Spirit ofaWarrior ၂၉ ဇွန် ၂၀၁၈53:13 Yangon, Myanmar Defended the ONE Middleweight Championship.
Win 22–10 (1) Alexandre Machado TKO (head kick and punches) ONE Championship: Quest for Gold ၂၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၈ 1 1:24 Yangon, Myanmar Won the ONE Light Heavyweight Championship.
Win 21–10 (1) Alain Ngalani Submission (guillotine choke) ONE Championship: Hero's Dream ၃ နို ၂၀၁၇ 1 4:31 Yangon, Myanmar Openweight bout.
Win 20–10 (1) Vitaly Bigdash Decision (unanimous) ONE Championship: Light ofaNation ၃၀ ဇွန် ၂၀၁၇55:00 Yangon, Myanmar Won the ONE Middleweight Championship.
Loss 19–10 (1) Vitaly Bigdash Decision (unanimous) ONE Championship: Quest for Power ၁၄ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၇55:00 Jakarta, Indonesia For the ONE Middleweight Championship.
Win 19–9 (1) Michal Pasternak Decision (unanimous) ONE Championship: State of Warriors ၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၆35:00 Yangon, Myanmar
Win 18–9 (1) Aleksei Butorin Submission (arm-triangle choke) ONE Championship: Dynasty of Champions6၂ ဇူလိုင် ၂၀၁၆21:57 Hefei, China
Win 17–9 (1) Mohamed Ali Submission (guillotine choke) ONE Championship: Union of Warriors ၁၈ မတ် ၂၀၁၆ 1 2:38 Yangon, Myanmar
Win 16–9 (1) Mahmoud Salama KO (punches) ONE FC: Era of Champions ၁၄ ဇွန် ၂၀၁၄ 1 1:07 Jakarta, Indonesia
Lose 15–9 (1) Jonavin Webb TKO (knee) CFFC 28: Brenneman vs. Baker ၂၆ ဩဂုတ် ၂၀၁၃ 1 2:41 Atlantic City, United States
Win 15–8 (1) Shedrick Goodridge Submission (guillotine choke) CFFC 26: Sullivan vs. Martinez ၁၇ ဩ ၂၀၁၃21:44 Atlantic City, United States
NC 14–8 (1) Kyle Baker No Contest CFFC 23: La Nsang vs. Baker ၁၃ ဧ ၂၀၁၃ 1 0:24 Pennsylvania, United States
Win 14–8 Jason Louck KO (punch) CFFC 17: Nsang vs. Louck ၁၃ အောက် ၂၀၁၂ 1 2:30 Delaware, United States
Win 13–8 Jesus Martinez TKO (punches) Bellator Fighting Championships 68 ၁၁ မေ ၂၀၁၂ 1 0:36 Atlantic City, United States
Loss 12–8 Sam Oropeza Submission (guillotine choke) Matrix Fights5၂၆ မတ် ၂၀၁၂20:56 Philadelphia, United States
Loss 12–7 Drew Puzon Decision (unanimous) ROC 38: Ring of Combat 38 ၁၈ နို ၂၀၁၁34:00 Atlantic City, United States
Win 12–6 Casey Manrique TKO (punches) ROC 37: Ring of Combat 37 ၉ စက် ၂၀၁၁21:03 Atlantic City, United States
Loss 11–6 Uriah Hall KO (punch) ROC 35: Ring of Combat 35 ၈ ဩဂုတ် ၂၀၁၁31:37 Atlantic City, United States
Win 11–5 Mitch Whitesel Submission (guillotine choke) ROC 34: Ring of Combat 34 ၂၄ ဖေ ၂၀၁၁ 1 3:09 Atlantic City, United States
Loss 10–5 Costas Philippou TKO (punches) ROC 33: Ring of Combat 33 ၃ ဒီ ၂၀၁၀ 1 0:11 New Jersey, United States
Win 10–4 Chris Price Submission (guillotine choke) C3: Furious ၉ မေ ၂၀၀၉ 1 1:37 Indiana, United States
Win 9–4 Steve Evan Dau Submission (armbar) C3: Domination ၂၂ နို ၂၀၀၈21:47 Indiana, United States
Win 8–4 Josh Mix Submission (armbar) MFL: Michiana Fight League ၈ ဩဂုတ် ၂၀၀၈ 1 1:03 Indiana, United States
Loss 7–4 James Lee Submission (heel hook) KOTC: Explosion ၁၅ ဇွန် ၂၀၀၇ 1 3:51 Michigan, United States
Win 7–3 Shawn McCully Submission (armbar) CFC 1: Cage Fighting Championships 1 ၃၁ မတ် ၂၀၀၇ 1 0:59 United States
Loss 6–3 Julio Paulino Decision (unanimous) CFC 1: Cage Fighting Championships 1 ၃၁ မတ် ၂၀၀၇35:00 United States
Win 6–2 Erik Brettin KO Heartland: Ground n Pound ၂၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၀၇ 1 0:18 Indiana, United States
Loss 5–2 Jim Martens Decision (unanimous) KOTC: Mass Destruction ၂၆ ဇန်နဝါရီ ၂၀၀၇25:00 Michigan, United States
Win 5–1 Brandon Griffin Submission (Armbar) KOTC - Meltdown ၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၀၆ 1 0:52 Indiana, United States
Win 4–1 Jason Law Submission UFL2- United Fight League2၂၅ ဩဂုတ် ၂၀၀၆ 1 Indiana, United States
Win 3–1 Steve Lapear KO (Punches) Heartland - Ground n Pound ၇ ဇွန် ၂၀၀၆ 1 0:40 Indiana, United States
Win 2–1 Noel Gomez Submission (armbar) UT: Ultimate Throwdown ၁၃ မေ ၂၀၀၆ 1 2:25 Indiana, United States
Win 1–1 Halton Flowers KO CF: Champions Factory ၁၁ မတ် ၂၀၀၆ 1 0:00 Indiana, United States
Loss 0–1 Emerson Rushing TKO (doctor stoppage) TFC 3: Total Fight Challenge3၂၅ မတ် ၂၀၀၅ 1 2:24 Indiana, United States
ONE Middleweight World Championship (One time, former)
ONE Light Heavyweight World Championship (One time, current)
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃ ရက်နေ့တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ လာ့ဗီးဂတ်မြို့၌ ကျင်းပခဲ့သည့် World MMAAwards 2018 ဆုပေးပွဲတွင် ၂၀၁၈ နိုင်ငံတကာအကောင်းဆုံးဖိုက်တာဆု (2018 International Fighter of the Year) ဆုကို ရရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုဆုပေးပွဲကို ဗြိတိန်တွင် အခြေစိုက်သည့် Fighter Only မဂ္ဂဇင်းက ရွေးချယ်ချီးမြင့်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤဆုပေးပွဲတွင် အောင်လအန်ဆန်းသည် တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံးကစားသမားဆု၏ ဆန်ကာတင်စာရင်းတွင်လည်း ပါဝင်ခဲ့သေးသည်။
↑ Aung La N Sang Profile။ October 17, 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၄.၀ ၄.၁ ချစ်ဝိုင်း၊ ရွှေဘုတ် (၁ ဇူလိုင် ၂၀၁၇). "အောင်လအန်ဆန် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ပထမဆုံးကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဆု ဆွတ်ခူးပေး". ၇ ရက်နေ့စဉ်သတင်းစာ (၁၄၉၀). Retrieved on ၁ ဇူလိုင် ၂၀၁၇. Archived2July 2018 at the Wayback Machine.
↑ "အောင်လအန်ဆန် နိုင်ငံတကာအကောင်းဆုံး ဖိုက်တာဆု ဆွတ်ခူး" . ၇ ရက်နေ့စဉ်သတင်းစာauthor=ရွှေဘုတ်. Archived5July 2019 at the Wayback Machine.
↑ ကချင်အမျိုးသား အောင်လနှင့် ရောသမမွှေတိုက်ပွဲ။ ဧရာဝတီဘလော့ဂ် (၂၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၂)။[လင့်ခ်သေ]
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အောင်လအန်ဆန်း&oldid=700053" မှ ရယူရန်